Quraan iyo Quraafaat – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Quraan iyo Quraafaat
Quraan iyo quraafaad
Sida kucad kala dhantaalida shaydaan iyo dadka e quraanka, waxa uu muujinaya duni marna ku sixraysa marna aad ka yaabayso; ood moodyso inaad dhagaha u raaricinayso sheeko xariirtii samanadii hore .
Quraanku maahan mid kawaramaya xaqiiqooyinka aadanaha ku wajahan, se taa lidigeed waa mid marna ku daacsnaya aadane, marna uga sheekaynaya sheeko xariiro aan daba gal iyo raad raac toona lahayn ( allahu aclam).
Qofka aadanaha ahi waxa uu xaq u leeyahay waxa uusan awoodin fasirkeedu inuu u helo mid aqoonteeda leh oo ukala hufa.
Deedna u xaqiijiya wax walba iyo sida dhabta ah ee keentay; allahu aclam qof loogu qalbi tiraa maahan mid duni iyo daankaleba wax ka og .
Hase ahaate waxaad aayadaha qaar ka dha-dhansanaysaa hanjabaado iyo caga juglayn loosoo jeedinayo qof markiisa horeba lagu sheegay in dhoobo iyo biyo la isku qooyay laga askumay.
Hadaba waa maxay sababta alle uu ugu hanjabayo axad si sahlan usara istaajiyay (kun fayakuun) ?.
Mala-awaal iyo caga julayn kali ah kuma ekaan ,se waxa uu toosho afwayn leh yiri ku raadiya walax uu shaydaan inoogu carabaabay oo yiri isagaa foolxumo oo dhan ugaas u ah.
Quraanku malahaygu maahan iskada alle ,ee uu qof caqli iyo xishoonayo uu qoray , waxaan sida u idhi marka aad si fuican u dhuuxdo dhagahana u rido waxaad ka dhex arkaysa aayado qaarkood aad afka inaad soo mariso aad ka xishoonayso .
Galmo,kufsi,farji naageed, xaydnaag, shahwad rageed,boob,bililiqo iyo kharbudaad .
Quraanku waa midka aadanaha akhristaa noloshan aduun uu ku nacayo waayo waa mid ka sheekaynaya duni sixir u eg oon dhag iyo dhaayoba lagu hayn; waa mid aad moodo micnihiisu inuu isugu imanayoqanuunloogu tala halay hantida umada iyo farjiga dumar in lagu baneesto loo qoray.
Mudo ay dhawr dabshid ka soo wareegtay malahayga ayaan dhagaystay rag dhalin u badan oo wadaad anan hada magaciisa carababyn su,aal soo waydiiyay.
Dhalintan waxay ahayeen dhalin kunool dalka UK. Waxa ay sheekhii waydiiyeen inay xalaal tahay hadii ay boob ka gaystaan bangiyada kufaarta (wa sida wax magaratadu utaqaan qofka aadanaha ah,se aan buugan liqi wayay) .
Warcelinta wadadku maahayn mid cilmi iyo caqli aadane toona ku slaysneed, se taa badalkeed kitaab sixirkii ayuu uga dhex raadiyay xeer uu uga xalalaynayo boobka hanti bulsheed oo waliba dhulkooda loogu tagay.
Shekadan waxaan isoo qaatay ujeedkayguna yahay in quraanku uu yahay fidnada ugu wayn ee bulshada islaamka ah takoorka ka dhigtay, waana sunta kali ah een wali dawo loohayn maxayeelay waxaad ka daremaysa bulashada ku cusub diinta hadana u taagan inay nafta is dhaafiyaan iyagoo ujeedkoodu jahay dunida sixirka ah ee uu ka sheekaynayo kitaabku .
Hadaba, akhristow maxaad ula yaabi holaca iyo naar afuufka ka socda dhulalka ay dadka muslika ahi daganyihiin!.
Umada islaamka ahi uma ahan diyaar noloshan aduun oo waxay ku badsheen mida dhalanteedka ee bugaagta duuga ah ugu qoran.
Layaab maleh qofka isagoon aqoon maadi-ah meersan ee lagu dul akriyay sixirka quraanka deedna sun inta biyo loogu tufe (tahliil ) la cabsiiyay, deedna nafta dhaafiyay bulsho waqti iyo waayo badan usoo taagna wax tar iyo tiraabna bulshada ulahaan lahaa